Trump oo dumarka ka raalligeliyay aflagaaddo - BBC News Somali
Trump oo dumarka ka raalligeliyay aflagaaddo
8 Oktoobar 2016
Image caption Trump
Musharaxa madaxtinimada ee xisbiga Jamhuuriga ee dalka Mareykanka Donald Trump ayaa raalligelin ka bixiyay hadal anshax xumo ah oo uu ka sheegay dumarka, kaddib markii ay soo baxday cajalad muuqaal ah oo la duubay 11 sano ka hor.
Muqaalkaasi ayaa laga dhex maqlayay Trump oo ku faanaya raadinta iyo isku dayga in uu la galmooda dumarka, waxa uuna intaa ku daray in qofka caanka ah uu wax kastaa samayn karo.
Siyaasiin caan ah oo ka tirsan xisbigiisa Jamhuuriga ayaa hadalkaasi aad u cambaareeyay, waxaana siyaasiintaasi ka mid ah afhayeenka aqalka wakiilada Paul Ryan, oo hadalkaasi ku tilmaamay mid laga caroodo.
Tifaaftiraha BBC-da ee woqooyiga Ameerika ayaa sheegaya in arrintan ay jahawareer ku tahay musharaxnimada Trump.
Trump oo raalligelin bixinayay ayaa ballan qaaday in uu noqon doono nin wanaagsan, balse waxa uu ku eedeeyay madaxweynihii hore ee mareykanka Bill Clinton oo ah seyga Hillary Clinton oo uu hadda loolan kala dhexeeyo in uu aflagaadeeyay dumarka, iyo in Hillary ay ceebeysay haweenkii uu dhibaateeyay ninkeeda.